USilbano Garcia, II. ukhonza njengomvangeli emabandleni kaKristu, futhi ungumsunguli we-Internet Ministries. Ngomhla ka-May 1, i-1995 waba nendima ekusakazeni isango lokuqala le-Inthanethi lamasonto kaKristu emhlabeni jikelele owaziwa ngokuthi I-Church-of-Christ.org. INkosi imsebenzise ekumiseni amabandla ayisihlanu, futhi ubhapathize imiphefumulo ye-1,527 emzimbeni kaJesu Kristu. UNkulunkulu kuphela owazi inani lemiphefumulo efikile kuKristu ngokusebenzisa izifundo zethu ze-intanethi kanye nokufinyelela nge-Internet Ministries. UMfoweth 'uGarcia uye waziwa njengomvangeli we-Inthanethi futhi iphayona emkhakheni we-Evangelism ye-intanethi. Uye waba usizo ekusizeni amakhulu amabandla ekusebenziseni i-intanethi njengendlela yokusabalalisa iVangeli likaJesu Kristu.